Mayelana NATHI | Hebei Huasheng Felt Co, Ltd.
Ukusibekela indawo eyi-11,000sqm futhi sinezitshalo ezi-2, manje sikhiqiza izinhlobo ezintathu zemikhiqizo:
Eyokuqala, Inaliti yokushaywa kwenaliti yazwakala, kufaka phakathi imizwa ye-polyester, imizwa yoboya, izwakala nge-acrylic, i-viscose izwakala, i-carbon fiber yazizwa, i-PP izwa, imizwa yokuzizwa, ilangabi lomlilo lizwa, ukubuyiselwa kwamanzi kuzwakala, njll.
Okwesibili, uboya obuCindezelwe babuzizwa, kufaka phakathi ishidi elizwakala ngoboya, uboya buzwa umqulu, uboya buzwa umucu, njll.
Imithathu, imikhiqizo yoku-Post-process, kufaka phakathi i-PVC enamachaphaza we-anti slip, i-singeing yazwakala, iphrinta yizwa, isikhwama sizwa, imihlobiso, njll.
Inkampani yethu ifake izintambo zokukhiqiza ezithuthukile ngokusho kwamazwe omhlaba
izindinganiso. Futhi inokusika i-laser, ukugxusha, ukufaka i-singeing, ukucwilisa neminye imishini yokusebenza. Imishini yokuhlola ifakelwe umshini wamandla idijithali, umtshini we-fiber electronic, i-splitter, njll, okuqinisekisa ngokuphelele ukuthi imikhiqizo ivumelana ne-European Union kanye ne-United States.
Kuze kube manje, inkampani yethu isidlulise i-ISO9001 ne-ISO14001 ikhwalithi yamazwe omhlaba kanye nezitifiketi zohlelo lokuphathwa kwemvelo. Futhi yonke imikhiqizo isidlulisile izitifiketi ze-CE, RACH, RoHS, njll. Nge-TUV, SGS.
Ngamandla avelele we-OEM / ODM, ikhwalithi yomsindo, ukudizayina okusha, intengo yokuncintisana kanye nensizakalo ethembekile, sinqobile ekudumiseni komphakathi okuhle kakhulu phakathi kwabalingani bethu bomhlaba wonke. Ukuthola imininingwane eminingi, xhumana nathi manje.
Umbukiso nokuvakasha kwamakhasimende